PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-10-15 - Akuliwe nobungozi bokuzimuka
Akuliwe nobungozi bokuzimuka
NGOLWESINE kuleli sonto bekuyiWorld Obesity Day okuwusuku lapho kuqwashiswa ngobungozi bokuzimuka ngokwedlulele.
Izibalo zabeWorld Health Organisation (WHO) zikhomba ukuthi kusukela ngo-1980 sesiphindeke kabili isibalo sabakhuluphele emhlabeni. Izibalo zakwaWHO zithi ngo-2014 bangaphezu kuka-1,9bln abadala abakhuluphele.
Kulesi sibalo, abangu-600mln babo bakhuluphele lokhu okubabazisayo nokuyingozi. Ngawo u-2014 abakwaWHO baveza ukuthi izingane ezingu-41mln ezineminyaka yobudala engaphansi kwemihlanu zikhuluphele ziyaqhuma. Lokhu kuyethusa ngoba yizingane lezi iningi lazo ezingakangeni nasenkulisa. Kwabaningi abakhuluphele ngokweqile bahlezi bezithethelela ngokuthi wufuzo.
Yize lokhu kunamanenjana eqiniso, nabo abantu abazimukile kumele benze okuthile ukuphuma kuleli tilongo eliheha izifo eziyingozi. Izibalo zikhomba ukuthi abantu abakhuluphele basheshe bafe. Lokhu kudalwa ngukuthi ukukhuluphala kumema izifo eziningi ezidalwa yindlela yokuphila njengesifo senhliziyo, iphika, izinso, ukuba nomfutho ophezulu wegazi nesifo sikashukela.
Okunye kwalokhu yizinto ezingagwemeka ngokwehlisa izinto ezingoncamnce. Kumele kugqugquzelwe ukudla ukudla okunomsoco nokuyizakhamzimba kulabo abakhuluphele. Kumele kugqugquzelwe nokuthi kuyekwe ubuvila. Mkhulu umehluko ongenziwa ukunciphisa isikhathi esichithwa kugqolozelwe iTV. Amagxathu ambalwa nje angahanjwa ngumuntu esikhundleni sokukhonza ukupaka eduze kwalapho esuke eya khona kungawenza umehluko. Ukuzijwayeza ukuphuza amanzi amaningi esikhundleni seziphuzo ezihlwahlwazayo nokuqeda nya iziphuzo ezinoshukela kungasiza. Abantu abake abasebenzise izitebhisi kunokugibela ikheji likagesi. Okokukhuluphala kwezingane kuyaphoxa ngoba injumbane ikhomba kubazali ngoba yibo abakwazi ukulawula okudliwa ojahidada.
Izingane ezizimukile zinamathuba amancane okuba nabangani, ezinye zikhula zizenyeza. I-WHO ikubeka kucace ukuthi ukuzimuka ngokwedlulele yinto engagwemeka. ENingizikmu Afrika kumele sizibuze ukuthi silindeni uma lolu daba singalubuki njengoluphuthumayo.